WordPress 2.1 dị ebe a ... Hmmmm | Martech Zone
WordPress 2.1 dị ebe a… Hmmmm
Tuesday, January 23, 2007 Tuesday, January 23, 2007 Douglas Karr
Ndị juri ahụ out Aga m echere ndị ọzọ ka ha banye na WordPress 2.1 mana nke a bụ mbido:
Obi dị ha ụtọ na ha degharịrị ụfọdụ nhọrọ menu - blogroll na-eme ka nghọta karịa njikọ na nkọwa dị mma karịa mkparịta ụka.
Anọ m na OSX wee nwalee 3 nchọgharị, Safari, Camino na Firefox 2 ma onweghị onye ga-ekwe ka m chọgharịa ihe onyonyo m bugoro. Mmelite: Ọzọkwa gbalịrị Internet Explorer 7 na Windows XP ma nwee otu okwu ahụ.
Ummmm… Gbalia ihu n’ihu gbanyụọ plugins gi tupu nweta nkwalite. Ooops… saịtị m mara mma nke ọma ebe ahụ otu elekere ma ọ bụ ka m mere ka m wughachi.
Enweghị m otu ngwa mgbakwunye nke mebiri… mana m gbagoro na-emegharị ọ bụla iji nweta saịtị ahụ.
Admin yiri obere umengwụ… nwere ike bụrụ m. Ọrụ autosave na-amasị m !!!
Ọ bụrụ na m pịa Jikwaa Uploads… oghere ihuenyo nakwa.
Gịnị ka unu chere? Enweghị ike ịchọgharị na fanye onyonyo ga-egbu m. (Enwere m ike bulite ha na-enweghị nsogbu). Anaghị m emelite ọ bụla ahịa ruo mgbe m nụrụ ụfọdụ ọzọ.
OSX: Hazie windo gị na njedebe
Firefox mbanye anataghị ikike: Chọọ My Blog iji Keymarks
Jan 23, 2007 na 11: 15 AM
Ana m ejide nkwalite ahụ ruo nwa oge ruo mgbe m ga-anụkwu. Agụọla m ọtụtụ akụkọ egwu banyere ọtụtụ plugins anaghị arụ ọrụ ọzọ.
Jan 25, 2007 na 9: 25 AM
Enweghị m ike ịbanye na Admin ugbu a. Aga m eme ihe nhichapụ ngwa mgbakwunye iji hụ ma ọ ga-enyere aka.
Jenụwarị 25, 2007 na 3:21 PM
Naanị mmelite… ọ dị ka enwere ụfọdụ ọrụ omenala na isiokwu m nke na-emeghị nke ọma na mgbanwe nchekwa data.